၁၉နှစ်ပြည့်မွေးနေ့ | ကျွန်မ၏ခံစားမှုများ သီကုံးရာ လွတ်လပ်ခြင်းအနုပညာ
December 13, 2007, 2:09 am
Filed under: Best Wishes, Lin Let Kyal Sin
တစ်နှစ်ကုန်ခါနီးလို့ မွေးနေ့ကို တစ်ဖန်ပြန်ရောက်လာပြန်ပြီ .. ။ ချမ်းအေးလှတဲ့ နှင်းတွေကြားက ဒီဇင်ဘာ ၁၃ရက်နေ့ မနက်မှာ ကျေးဇူးကြီးမားတဲ့ အမေရဲ့ မွေးဖွားသန့်စင်မှုကြောင့် လူ့လောကထဲကို ရောက်ရှိလာတဲ့အတွက် မေမေကို ကျေးဇူးတင်စွာ ရှိခိုးကန်တော့ပါတယ် .. ။ ဘာလိုလိုနဲ့ ကျွန်မအသက် ၁၉နှစ်တောင် ပြည့်သွားပြီ … ။ ကျွန်မ မွေးနေ့အတွက် မွေးနေ့မရောက်ခင်ကတည်းက ကြိုတင်သတိရနေပြီး ဆုတောင်းပေးနေကြတဲ့ သူငယ်ချင်းများ ၊ ည၁၂နာရီအကျော်မှာ အွန်လိုင်းနှင့်ဖုန်းမှတဆင့် ဆုတောင်းပေးကြသူများအားလုံးကို ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင် … ။ ကျွန်မ အများကြီးဝမ်းသာပါတယ် .. ။ အခုလို ဆုတောင်းစာတွေ ဘလော့ခ်မှာရော အပြင်မှာပါရတာ ကျွန်မ မျက်ရည်တောင်ဝဲမိပါတယ် .. ။
ဒီနေ့ မနက်အစောကြီး ကျွန်မထပြီး အိမ်မှာပဲ ဘုရားပန်းကပ် ၊ ဆွမ်းတော်ကပ် ၊ ရေချမ်းကပ် ၊ နောက် သစ်သီးအချို့ ဘုရားကိုတင်ပြီး အခု Clementi ဘုန်းကြီးကျောင်းကို ကျွန်မသွားပါတော့မယ် .. ။ ဒီနေ့ တစ်နေကုန် ကျွန်မ မွေးနေ့အတွက် စီစဉ်ထားတာတွေနဲ့ အပြင်မှာပဲ ရှိနေမှာမို့ ညပြန်ရောက်မှ အားလုံးစာပြန်ရေးပေးပါ့မယ် … ။ ကျွန်မမွေးနေ့မှာ ကျွန်မ ဘလော့ခ်ကိုအလည်လာရောက်ကြသူများအားလုံး ကျန်းမာပျော်ရွှင်ကြပါစေရှင် … ။ အဝေးက သတိရနေသူများအားလုံးလည်း ပျော်ရွှင်ချမ်းမြေ့ကြပါစေ … ။
ပျော်ရွှင်သော မွေးနေ့ ဖြစ်ပါစေ ညီမလေးရေ၊
Comment by ကောင်းကင်ကို December 13, 2007 @ 2:26 am
Comment by lwinmoe December 13, 2007 @ 3:06 am
Comment by chaos December 13, 2007 @ 4:04 am
Happy Birthday!! Nyi Ma Lin let!!!
May you be ever stronger for your desire for Burma!!
May you be successful in your interested professional fields!!
May you beahappy long life you’ve wanted!!
Comment by YeKyawAungMDY December 13, 2007 @ 6:23 am
happy birthday ပါ လင်းလက် 🙂
Comment by MgThaJan December 13, 2007 @ 9:28 am
It is better to createalittle star than to cry for the moon.
Happy Birthday, LinLet!
Comment by red bodhi December 13, 2007 @ 9:58 am
Happy Birthday Lin Let ပျော်ရွှင်ဖွယ် မွေးနေ့လေး ဖြစ်ပါစေ ညီမလေးရေ၊ အသက် ရာကျော်ရှည်ပါစေ၊ အမြဲတမ်း ပျော်ရွှင်နိုင်ပါစေ လို့ ဆုတောင်းပေးပါယ်
Comment by Chit Lay Pyay December 13, 2007 @ 1:44 pm
အစ်မရေ ပျော်ရွှင်ဖွယ်မွေးနေ့ဖြစ်ပါစေနော်။ နောက်နောင်လည်း ဒီထက်ပိုပြီးတိုင်းပြည်အကျိုးသယ်ပိုးနိုင်ပါစေ။ မျှော်မှန်းထားသမျှ ကိုအခက်အခဲမရှိပဲအောင်အောင်မြင်မြင်လုပ်ဆောင်နိုင်
Comment by Winkabar December 13, 2007 @ 3:13 pm
အားလုံး ကျေးဇူးပါရှင်။ မွေးနေ့အတွက် ရေးပေးကြတဲ့ စာတွေကို အမှတ်တရအနေနဲ့ သိမ်းထားချင်တာမို့ စီဗောက်စ်က ဆုတောင်းစာတွေကို ကျွန်မ ဒီနေရာမှာ အမှတ်တရအဖြစ် ကူးယူဖော်ပြလိုပါတယ် .. ။
19 နှစ်မြောက်မွေးနေ့မှသည် နောင်နှစ်ပေါင်းရာကျော်တိုင် နိုင်ငံနဲ့လူမျိုးအကျိုးကို အတွက် ယုံကြည်ချက် အပြည့်ဖြင့် ချစ်တဲ့သူနဲ့လက်တွဲ ကာ အောင်မြင်စွာ ဆောင်ရွက် နိုင်ပါစေဗျာ အားလုံးလဲ မလင်းလက် ရဲ့ ၁၉ နှစ်မြောက်မွေးနေ့ကိုဝိုင်းဆုတောင်းလိုက်ကြရအောင် မွေးနေ့ရှင်ကတော့ဘာမှ မကြွေးသေးဘူး
2) KWNO: : Happy birthday, happy always ! Lin Lat..
3) 13 Dec 07, 02:14
Myo Chit: HAPPY BIRTH DAY TO YOU HAPPY BIRTH DAY TO YOU HAPPY BIRTH DAY DEAR LIN LIN HAPPY BIRTH DAY TO YOU
4) DickRock: Happy Birth Day ပျော်ရွှင်စရာမွေးနေ့ဖြစ်ပါစေ ဒီဇင်ဘာ ၁၃ မှာမွေးဖွားခဲ့သည့် အထင်ကရ လူများ စာရင်းကို ဒီမှာ ကြည့်ပါ http://www.nndb.com/lists/865/000106547/
5) ၀င်္ကပါ: အစ်မရေပျော်ရွှင်ဖွယ်မွေးနေ့လေးဖြစ်ပါစေနော်။ နောက်နောင်လည်းဒီထက်ပိုပြီး တိုင်းပြည်အကျိုးသယ်ပိုးနိုင်ပါစေ။ လုပ်သမျှအခက်အခဲမရှိပဲလုပ်ဆောင်နိုင်ပါစေနော်။
6) susan u. s. a: happy Birthday
7) မေဓာဝီ: မွေးနေ့မှာ ပျော်ရွှင်ပါစေ … ညီမလေး အသက်ရာကျော်ရှည်ပြီး ချစ်တဲ့သူများနဲ့ ပျော်ရွှင်စွာ နေထိုင်နိုင်ပါစေ ..
8) s0wha1: ညီမလေး…ပျော်ရွှင်စရာ မွေးနေ့ဖြစ်ပါစေ…
9) AD: ပျော်ရွှင်သော….မွေးနေ့မြတ် ပါ…ဟုဆိုချင်..၏..
10) FreeBurma-FreeBurma: Happy Birthday ညီမလေး လင်းလက်ကြယ်စင် …. နောက်လာမည့်မွေးနေ့မှာ ဒီမိုကရေစီအောင်မြင်မှုကြီးနဲ့ အတူပျော်ရွှင်နိုင်ပါစေ …..
11) free_eye: ပျော်ရွင် သော မွေးနေ့ ဖြစ်ပါစေဗျားးးးးးး
12) me: Happy Birthday sis Lin Let.wish u all the best
13) chaos: မွေးနေ့မှာပျော်ရွှင်ပါစေ ကွန်မန့်လဲပွတ်သွားတယ်နော့
14) BBM: Happy birthday ပါ မလင်းလက်ကြယ်စင်…… ထာဝရပျော်ရွင်နိုင်ပါစေ…
15) nyeenyee: Happy Birthday Lin let, wish u happy & healthy
16) K: ပျော်ရွှင်ဘွယ်မွေးနေ့ဖြစ်ပါစေ.. ညီမလေးရေ.. ခင်မင်လျက်..မကေ
17) moe: happy birthday, Linlet
18) Z..: ယုံကြည်မှု ခိုင်မြဲပါစေ။
19) Smilemay: မွေးနေ့မှာ ပျော်ရွှင်ပါစေ ညီမလေး
20) myintmo: HAPPY BIRTHDAY
21) Aung: Happy Birthday Linlet……..
22) chitlaypyay: Happy Birthday Lin Let ပျော်ရွှင်ဖွယ် မွေးနေ့လေး ဖြစ်ပါစေ ညီမလေးရေ၊ အသက် ရာကျော်ရှည်ပါစေ၊
23) kyaw zin tun: happy birthday!! 2day also my birthday…
24) 13 Dec 07, 21:07
happy: happy birthday wish all your dreams come true
25) စိုင်းမွန်: တည်ငြိမ်ခြင်း၊ရင့်ကျက်ခြင်း၊ပိုင်ဆိုင်ဆိုင်ဖို့ တွန်းအားပေးလိုက်သလို၊ လူမှု့ တာဝန်တွေကိုပိုပြီးထမ်းဆောင်နိုင်ပါစေလို့ ဆုတောင်းပေးပါတယ်၊
26) ko nyi: happy bithday ma lin let
Comment by LIN LET KYAL SIN December 13, 2007 @ 3:37 pm
same to you, baby lay
Comment by Tina December 13, 2007 @ 3:45 pm
Teen age ရဲ့နောက်ဆုံးနှစ်ဒီမွေးနေ့လေးဟာ ပျော်ရွှင်မှု အပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံပါသော မမေ့နိုင်စရာ အမှတ် တရနေ့ကလေးတနေ့ ဖြစ်ပါစေလို့ ဆုမွန်ကောင်း တောင်းလိုက်ပါတယ် ခင်ဗျာ…။
Comment by ညီလင်းသစ် December 13, 2007 @ 10:06 pm
27) လူမော်: မွေးနေ့ မှာ ပျော်ရွှင်ပါစေ ခင်ဗျာ…။
28) thadar: ပျော်ရွှင်မွေးနေ့ဖြစ်ပါစေ ။ အသက်အရွယ်နှင့်မမျှလိမ်မာယဉ်ကျေးသောကြောင့် သမီး မေမေအားမသဒ္ဓါမှဂုဏ်ယူကြောင်း ပြောကြားပေးပါ။
29) margha: happy birth day and happy life for you and your love.
30) သာလှဦး: ညီမလေးအသက် (၁၉) နေ့ပြည့်မွေးနေ့မှာ ညီမလေးစားဖို့ ကိတ်မုန့်လေးတလုံး လက်ဆောင်ဝယ်ပေးသွားပါတယ်။ (စိတ်ကူးနဲ့)
31) myogyi: happy birthday linlet
32) ကိုဇင်: Happy Birthday ပါ ညီမလေး လင်းလက်ရေ…
33) အောင်သူ: မွေးနေ့ ဆုတောင်း နောက်ကျသွားတဲ့အတွက် ခွင့်လွတ်ပါ။
13 Dec 07, 23:18
အောင်သူ: ညီမလေးလင်းလက် မွေးနေ့မှာ ပျော်ရွှင်ပါစေ…
34) john: Hi little linlet Happy Birthday to you.wished for you all the best for you life’s time.
35) ပုထုဇဉ်: လင်းလက်ရေ၊ မင်္ဂလာမွေးနေ့ပါဗျို့၊ အခုမှ တွေ့ပါတယ်။
36) GG: happy birthday lin let
Comment by LIN LET KYAL SIN December 14, 2007 @ 2:24 am
happy birthday, nyi ma….
Comment by Mintasay December 14, 2007 @ 5:17 am
အရောက်နောက်ကျပေမယ့် ညီမလေးအတွက်Birthday wish လုပ်ပေး
Comment by Saung Yune La (aka) Way December 14, 2007 @ 8:44 pm
ဒီရက်တွေက ဘလော့တောင် မလည်နိုင်တဲ့ ဘ၀..
ခုမှ နောက်ကျ ရောက်လာတာ ခွင့်လွှတ်နော်..
Comment by ခင်မင်းဇော် December 15, 2007 @ 4:51 pm
မင်္ဂလာပါ လင်းရေ မွေးနေ့မှသည် နောင်နှစ်ပေါင်းများစွာတိုင် ကိုယ်ချစ်ရတဲ့သူများနဲ့ အတူတကွ နေထိုင်နိုင်ပါစေနော်။ ကျန်မာရွှင်လန်းပြီး နိုင်ငံ့အကျိုးကို သည့်ထက်မက သယ်ပိုးနိုင်သောသူတစ်ယောက် ဖြစ်ပါစေ…
sorry for my belated wish!!
Comment by ညလေး December 16, 2007 @ 10:14 am
Comment by Htoo Myat December 22, 2007 @ 9:01 am